नयाँ युगको नयाँ कुरा - परिहास - नेपाल
अर्काको कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकहरुले पनि अब अवकाशपछि पेन्सन, आवास, स्वास्थ्य आदि/इत्यादि खालका सुविधा पाउने भएका छन् । अब जनताले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट यस्ता सुविधा पाउने भए भनेर सरकारले पूरा तामझामपूर्वक हल्ला गर्‍यो । हल्ला गरेपछि हल्ला त हुने नै भयो । फलत: बजारमा अहिले नाना प्रकारका हल्ला बाफ बनेर उडिरहेका छन् ।
श्रमिकहरुले जाबो यति सुविधा पाउने कुरामा किन यति भयंकर हल्ला मच्चाइयो, त्यो देखेर आश्चर्यचकित छु । सरकारले अवकाशपछि सुविधा दिन थालेको यही पहिलो त अवश्य होइन । योभन्दा अघि पूर्वविशिष्टहरुलाई पनि अवकाशपछि थुप्रै सुविधा दिएकै थियो । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री आदि/इत्यादि पूर्वहरुलाई अवकाश हुनेबित्तिकै आवास, स्वास्थ्य, गाडी, पेट्रोल, भत्ता, सुरक्षा गार्ड आदि/इत्यादि सुविधा त दिएकै थियो । त्यस्ता सुविधा प्रदान गर्ने बेला त यस्तो कुनै तामझाम गरिएको थियो । जम्मै कुरा भित्रभित्रबाटै सकाइदियो । तर अहिले पूर्वश्रमिकहरुलाई सुविधा दिने बेला मात्रै किन यत्रो तामझाम ? राज्य कोषबाट दिनै नपर्ने सुविधाचाहिँ थाहै नहुने गरी खुसुखुसु दिने ।
अनि मजदुरलाई उनीहरु आफैँले जम्मा गरेको सुरक्षा कोषबाट दिने सुविधामा चाहिँ यत्रो हल्ला गरी हिाड्ने ?
खै ! नयाँ युगको सुरुआत भइसक्यो, हामी पुरानो युगको मान्छेले के जानूम् !